Jaljala Online – Page 31 – Jaljala Online
साउन २४, काठमाडौँ । स्थानीय तहको सामाजिक समस्या थाहा पाउने हो भने नगर वा गाउँपालिकाका उपप्रमुखलाई सोध्नुपर्छ । यो खबर हामीले अनलाइनखबरबाट साभार गरेका हौ न्यायिक समितिको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने भएकाले उपप्रमुखहरुले आफ्नो पालिकाभित्रको सामाजिक समस्याबारे मिहीन विश्लेषण गर्न सक्छन् । यसअघि हामीले मोरङको बेलबारी र सिन्धुपाल्चोकका केही पालिकाहरुका उपप्रमुखलाई त्यहाँको सामाजिक समस्या के छ […]
साउन २४, काठमाडौँ । सर्लाहीको मलङ्गवाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना ६ ७४६९ नम्बरको यात्रुवाहक बस शुक्रबार बिहान ३ बजे त्रिशूली नदीमा खस्दा चार जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा घाइते भएका १६ जनालाई उद्धार गरेर अस्पताल लगिएको र २५ जना हराइरहेको बताइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार बैदवारले बेपत्ताहरुको खोजी भइरहेको […]
त्रिशूली बस दुर्घटनामा यसरी बाँचे…
साउन २४, काठमाडौँ । निदाएको थिएँ। एक्कासी बस सडकबाट खसेछ। म झ्यालबाट उछिट्एिछु। अनिमात्र थाहा पाएँ। बस हेर्दा हेदै नदीमा डुब्न पुग्यो। बस पल्टिदा पाखामा उछिट्टिएकाहरुको रुवाबासी थियो। म साहै्र्र आत्तिए। के गर्ने के नगर्ने ठम्याउन सकिन। म किनारामै उछिट्एको थिएँ। खुट्टा भने बेस्सरी दुखेको थियो। रातको समय भएकाले अन्धकार थियो। कतै केही देखिएको थिएन। […]
कस्मिर प्रकरणबाट नेपाललाई पनि छ खतरा, तर कसरी ?
साउन २३, काठमाडौं । सांस्कृतिक राष्ट्रवाद र हिन्दुत्वसहितका मुद्दाको पृष्ठभूमिमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को जन्म भएको हो। यो खबर दीपकप्रकाश भट्टले नेपालखबरमा लेखेका छन् । भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउने मुद्दा भाजपा स्थापना कालदेखिकै हो। यस पटकको चुनावमा सो अनुच्छेद खारेज गर्ने विषय उनीहरुको चुनावी एजेण्डै थियो। त्यही विषय यतिबेला संसदबाट अनुमोदन भएको छ। अनुच्छेद […]
Posted on August 8, 2019 August 8, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
यस्तो छ तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान, कहाँ कहिले के हुन्छ ?
साउन २३, काठमाडौं । देशका धेरै स्थानको मौसम बिहीबार आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । पश्चिम र मध्यका केही स्थान र पूर्वका थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र चट्याङ्ग पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् । यस्तै राति देशका धेरैजसो स्थानमा सामान्य बदली हुने र केही […]
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले गरे सेनालाई यस्तो आग्रह, अब के होला ?
साउन २३, काठमाडौँ । भारतले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा र स्वायत्तता प्रदान गरेको संविधानको धारा ३७० निष्प्रभावी घोषित गरेसँगै पाकिस्तान रुष्ट देखिएको छ । तनावमा रहँदै आएको भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा यसले गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । र यसको प्रमाण पनि आइसकेका छन् । पाकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सीमित गर्ने तथा द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने घोषणा […]
भारतविरुद्ध पाकिस्तानले चाल्यो कडा कदम, बढ्यो तनाव, अब के होला ?
साउन २२, नयाँ दिल्ली । पाकिस्तानले आफ्नो देशमा रहेका भारतीय उच्च अधिकारीलाई निकाला गर्ने र भारतसँगको दुई देशीय व्यापार स्थगन गर्ने घोषणा गरेको छ । जम्मू कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने भारतको संविधानको धारा ३७० भारत सरकारले सोमबार खारेज गरेपछि पाकिस्तानले बुधबार यो घोषणा गरेको हो । “हामीले हाम्रा राजदूतलाई दिल्लीबाट स्वदेश फिर्ता गर्ने छौँ […]
Posted on August 7, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
पठाओमा ३०० ट्याक्सी आवद्ध, के छ ट्याक्सीभन्दा सेवामा फरक ?
साउन २२, काठमाडौं । दुई पांग्रे सार्वजनिक यातायात सेवा दिँदै आएको कम्पनी पठाओले अब चार पांग्रे सार्वजनिक सेवा पनि दिने भएको छ। यो खबर हामीले नेपालखबरबाट लिएका हौ । यसका लागि कम्पनीले राजधानीमा ट्याक्सी सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको हो। उपभोक्ताले पठाओको सेवा अत्यधिक रुचाएको भन्दै कम्पनीले आउँदो शुक्रबारदेखि ट्याक्सीमार्फत सेवा दिनलागेको जनाएको छ। कम्पनीकी […]
‘निष्ठुरी भगवानले महिना दिन पनि देख्न सकेन खुसी’ [नालीबेलीसहित]
साउन २२, बाजुरा । गौमुल गाउँपालिका–६ टुनिका जंगे चदाराको सपरिवार नयाँ घरमा सरेको महिना दिन पुगेको थिएन्। यो खबर कृष्ण ओलीले नागरिक न्युजमा लेखेका छन् । उनीसँगै अरु चार परिवार पनि असारको दोस्रो साता मात्र नयाँ घरमा सरेका हुन्। चारै परिवारले पहिरोको जोखिम हुदैन् भन्ने भरोसाका साथ पहाड खनेर घर बनाएका थिए। सोचेका पनि थिएनन्, […]
Posted on August 6, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
कस्मिर मामिलामा चीन पनि बोल्यो, दियो कडा प्रतिक्रिया
साउन २१, काठमाडौं । चीनले भारत शासित जम्मु–कस्मिरले पाइएआएको विशेष राज्यको संवैधानिक मान्यता खारेज गर्ने निर्णय आफ्ना लागि स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ हुआ चुनयिङले दक्षिण पश्चिम चीनको भूभागलाई समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पार्ने गरी तयार पारेको लद्दाख युनियन टेरिटोरी निर्माण गरेको उल्लेख गरेकी छिन्। ‘कस्मिरबारे हाम्रो अडान दृढ र निरन्तर […]
Previous 1 … 30 31 32 … 61 Next